Imisebenzi nge-Aetna International | E-Asia naseMpumalanga Ephakathi
Ikusasa Lokusebenza Kwezinto Eziphilayo Kuzochazwa Nge-Digital, Intuthuko Yezintambo
Imisebenzi nge-Aetna International - Umhlinzeki wezempilo we-Global Aetna International kusanda kuhlolwa Abasebenzi be-2,000 expat emhlabeni wonke, ukuthola ukuthi yiziphi izici zokufuduka emhlabeni wonke ezithinta impilo yabo nenhlalakahle yabo kakhulu.
I-91% yezidingo ezise-UAE ezithola ukuthi 'ukuthandana' isici esiyinselele kakhulu sokuthuthela kwamanye amazwe. Lokhu kuphakeme kune-global average (76%)
I-90% yezidingo ezise-UAE zithole ukuthi 'ukuthandana' kunomthelela empilweni yabo. Lokhu okuphindwe kabili isilinganiso somhlaba jikelele (45%)
I-91% yezidingo ezise-UAE zithole ukuthi 'ukuthola abangane abasha' kunomthelela empilweni yabo. Lokhu kungaphezu kokuphindwe kabili isilinganiso semhlaba wonke (43%)
I-40% yezidingo ezivela e-UAE zithi 'ukuthola umphakathi' kwaba nethonya empilweni yabo. Lokhu kuphakeme kune-global average (24%)
Izinselelo kanye nokuvinjwa kwezithiyo zomphakathi
Ukwengeza kulezi zibalo, ze uyavuma othole ukuphola kunzima, i-57% yayingamadoda ngenkathi i-43% yayingabesifazane. Ingabe lezi zinselele, okungukuthi ukuphola, zingabangelwa izithiyo zomphakathi ezifake ubuso lapho zihambela khona? Ngokwesibonelo, lolu cwaningo lwaveza ukuthi:
I-19% yezidingo ezise-UAE zithi ubulili bebayisivimbela kubo. Lokhu kungaphezu kwesilinganiso somhlaba wonke (13%)
I-15% yezidingo ezivela e-UAE zazizwa ukuthi ubuhlanga bebuyisivimbela kubo. Lokhu kungaphezu kwesilinganiso somhlaba wonke (9%)
I-6% yezidingo ezise-UAE zithi inkolo ibesiyisivimbela kubo. Lokhu kungaphezu kwesilinganiso somhlaba wonke (2%)
Kwama-expats atholakala ukuthi ubulili buyisivimbela, ama-83% ayengabesifazane ngenkathi kuphela i-17% yayingamadoda.
Lolu cwaningo lwaveza ukuthi, emhlabeni wonke, ukubandlululwa ngokobulili kwavezwa abesifazane kakhulu - nge-25% ethi ubulili beba yisithiyo kubo, uma kuqhathaniswa namadoda angu-5 kuphela.
Mayelana ne-Aetna International:
I-Aetna International ingenye yezihlinzeko zokunakekelwa kwezempilo emhlabeni jikelele, okuhlinzeka izinzuzo zezempilo ezingaphezu kwamalungu e-800,000 emhlabeni wonke. Ulwazi olungaphezulu mayelana ne-Aetna International lungatholakala lapha.
Joyina nabo futhi wenze impilo yakho njengesithunywa ukushintsha izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo emhlabeni jikelele.
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka okuhle iziqondiso Kwemisebenzi ku Dubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.